जेठ २ मा फर्किएर समस्या समाधान गर्ने सहमति भयो– गोकर्ण विष्ट
नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएर पार्टीको समस्या समाधान गर्नेबारे सहमतिमा पुगिएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रवार भएको छलफलमा सहभागि नेता विष्टले जेठ २ मा फर्किने सहमति भएको बताएका हुन् ।
‘जेठ २ मा फर्किएर पार्टीको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ, त्यसको लागि कार्यदल बनाएर मोडालिटी बनाउने सहमति भएको छ’ विष्टले लोकान्तरसँग भने । माधव नेपाल पक्षले जेठ २ गतेमा फर्किने विषयलाई बटमलाइन बनाउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा साझ साढे ६ देखि राति साढे ९ बजेसम्म शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । वार्तामा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायत सहभागि थिए ।
कार्यदलबारे भोलि बिहान दुइ शीर्ष नेताहरुबीच बसेर सदस्यहरुको टुंगो लगाउने विष्टले जानकारी दिए । शुक्रवारको वार्तामा संस्थापन पक्षको तर्फबाट रामबहादुर थापा पनि सहभागि थिए ।
‘आज सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल भयो’ बैठकपछि नेता रघुजी पन्तले भने ।
छलफलमा एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमाल तथा नेपाल समूहबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल सहभागि थिए ।
ओली र नेपालबीच बिहीवार भएको छलफल पछि एमाले विवाद सहमति उन्मुख भएको थियो ।
बाढी, पहिरो र डुबानमा परी १५ जनाको मृत्यु, १६ जन...
आधिकारिकता दावीका लागि निर्वाचन आयोग पुग्यो जसपाक...
पछिल्लो २४ घन्टामा २ हजार ७६८ जनामा कोरोना संक्रमण...
पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा जसप...
कक्षा ११ को मूल्याङ्कन असारभित्र
युरोकपमा आज तीन ठूला खेल हुँदै
युरोकप फुटबल : इंग्ल्यान्ड र स्कटल्याण्डको बराबरी
कसरी भएको थियो गोत्रको सुरुवात ?
भीष्मलाई देखेर किन हाँसिन् द्रौपदी ? महाभारतको रोचक कथा
स्मरणशक्ति बढाउने यी ८ उपाय